Water Bath mwaya Milk Pasterization Machine - China Qingdao rakadzikama Machinery
Bhati mvura pasterization muchina wakagadzirwa yepamusoro SUS304 steel.The Stainless simbi pajira riya bhandi zvakakwirira simba uye pasi elasticity, kwete nyore deform uye nyore yokuzvigadzirisa. The tembiricha uye nokukurumidza ndiyo chinjika maererano kugadzirwa Michina chinodiwa. The muchina kumhanya iri zvakanaka. Izvi kugadzirwa pasterization kwete chete akanatsiridzwa ari mbereko kunyatsoshanda asiwo rwakapedza dambudziko kukwana uye gogonera mbereko izvo kunokonzerwa yakaderera otomatiki chechetere. The chigadzirwa ...
Bhati mvura pasterization muchina wakagadzirwa yepamusoro SUS304 steel.The Stainless simbi pajira riya bhandi zvakakwirira simba uye pasi elasticity, kwete nyore deform uye nyore yokuzvigadzirisa. The tembiricha uye nokukurumidza ndiyo chinjika maererano kugadzirwa Michina chinodiwa. The muchina kumhanya iri zvakanaka.
Izvi kugadzirwa pasterization kwete chete akanatsiridzwa ari mbereko kunyatsoshanda asiwo rwakapedza dambudziko kukwana uye gogonera mbereko izvo kunokonzerwa yakaderera otomatiki chechetere.
The dzaFord adopts pasterization michina. Kushandiswawo pickled miriwo, yakaderera-tembiricha nyama zvigadzirwa, Sou bhinzi nomukaka zvigadzirwa, mondo nezvimwe zvokudya uye chinwiwa yakaderera-tembiricha mbereko.
Kana makasitoma kuda zvakananga kurongedza zvigadzirwa, tinogona batanidza yakachena mhepo nokuomesa mutsetse kwairi.
Previous: Electric kana Steam Heat Hot Air Food Kuomesa Machine
Next: Meat Food Defrosted Equipment
18l Kana 23l Dental Autoclave
Autoclave For Nzira Instrument
Autoclave cofee machine
Rinoumba Autoclave For Sale
Kumuda Portable Steam Autoclave
Kumuda Steam Autoclave
mukaka PA sterizer
pasterization muchina mukaka
Stainless Steel makorari Autoclave
Chiutsi dzinodzikinyidza Autoclave
Vacuum Kuomesa Autoclave